Sigiga dhoqqee Kaaliforniyaatin hammi du'an wayita dabalu 13 immoo bakki bu'an dhabame - BBC News Afaan Oromoo
Sigiga dhoqqee Kaaliforniyaatin hammi du'an wayita dabalu 13 immoo bakki bu'an dhabame
Goodayyaa suuraa Lubbuu baraartonni dubbartii sigiga dhoqqeen manni ishee Monteesitoo keessatti jijjigee wayita baraaran
Erga sigiga dhoqqee Kaaliforniyaa mudate mana dhibbaa ol mancaase namoota 17 ajjeesee booda lubbuu baraartonni namoota ammayyu hinargamiin 13 barbaacha jiru.
Bulchiinsa Saantaa Baarbaraa keessattis namoonni 28 biroon dhoqqee akka lolaatti irra yaa'een midhamuun isaanii barameera - bakki kun abbidda hamaa Kaaliforniyaa keessatti ka'ee tureen naannoo gubatedha.
Manneen 100 wayita jijjigan 300 immoo miidhaan irra gaheera.
Gartuu lubbuu baraartoota keessaa tokko , mucaa waggaa lamaa dhoqqeen bifa ishee dhabde tokko raaree gadi fagoo keessaa baasuu isaa ibsa.
Berkileey Joonsan akka jedhetti mucaan durbaa waggaa lamaa kun hospitaalatti kan geeffamte wayita ta'u luqqeettuu isheerraa miidhamni akka gahe dubbateera.
''Akkaataa itti mucaan kun lubbuun hafuu dandeesse waanan beeku hinqabu,'' jechuunis Obbo Berkileey gaazexaa dhuunfaa Saantaa Baarbaaraatti kan hime.
Waa'ee mana mataa isaa kan araddaa Montesitoo yeroo dubbatu: ''Bokkaa sa'aatii tokkoof roobetu manicha dhidhimse.''
Akka Obbo Joonsan jedhanitti isaafi haati warraa isaa Kaareen, erga sigiga dhoqqee akka lolaatti dhufee manicha dhidhimsee booda boo'icha mucaa dhagahanii guutuu mana isaanii liqimfamee sanarraa gad utaalle jedha.
Lamaan isaanii lubbuu baraartoota waliin ta'uunis mucaa sanaa dhoqqee jala qonnee baafne. Gara hospitaalatti utuu hingeeffamin dura hatattamaan dhoqqee afaan ishee keessa baasne jedha.
Image copyright Los Angeles PD
Goodayyaa suuraa Bakkeewwan ibiddaan gubatanitu lolaafi sigiga dhoqqeef kan saaxilame
Itti dabaluunis, ''utuu nuti gara bakka sana hindhaqne ta'e mucaan kun lubbuun jiraachuu hindandeessu ture,'' jedha.
Poolisiin Santaa Barbaara akka jedhutti namoonni 13 ammallee hinargamne. Reeffi nama lamaa Roobii kaleessaa waaree boodaa argameera, jechuun dubbatu. Kunis lakkofsa namoota du'anii akka dabalu godheera.
Namoonni 50 ol ta'an kan baraaraman yeroo ta'u, ammallee bakkeewwan baay'ee gahuuf hindanda'amne. Daandii guddicha 101 dabalatee daandiiwwan hedduu cufamaniiru. Angawonnis hanga Wiixataatti daandiwwan kun hinbanamani jedhu.
''Ammayyuu hojii lubbuu baraaruu keenya itti fufeera,'' kan jedhan dubbii himaan 'cal Fire' Kiriis Elmis, lakkoofsi namoota du'anii dabaluu ni mala jechuun akeekkachiisa kenanniiru.
''Kun sodaa jirudha. Nuti ammayyuu namoota lubbuun jiran argachuuf abdiin keenyaa guddaadha.''
Bulchiinsa Saantaa Barbaaraatti dubbi himaa kan ta'an Ambeer Andarsan immo; ''Eessa akka jiraachuu danda'an waan beeknu hinqabnu. Bakka tuullaa jijjigaa keessa jiru jennee yaadna,'' jedhaniiru.
Sigiga dhoqqee fi rooba cimaa Kaalifoorniyaatti mudateen namoonni kudha sadii lubbuu dhaban
Gargaartuun Kofii Anaan lammii Itoophiyaa turan